Genlọ ọrụ: Kwụsị Iri Gị Ike Site Links | Martech Zone
Genlọ ọrụ: Kwụsị Ikwusi Ike Gị Na Njikọ
Satọde, Satọdee 4, 2010 Saturday, October 18, 2014 Douglas Karr
Lọ ọrụ na ndị na-ese ihe na-arụsi ọrụ ike n'ịgbakwunye ha kwadoro site na na ntọala nke saịtị na ngwa ha na-ewu, mana ọ tụrụ m n'anya na ọtụtụ anaghị eji ohere ahụ enweta ụfọdụ ogo ọchụchọ. Mgbe m na-akọwara njikarịcha njin ọchụchọ na ogo na ndị na-eso ụzọ, ana m akọwa ya n'ụzọ a:
Na-peeji nke isiokwu njikarịcha - n'iji isiokwu n'ụzọ dị irè na ibe gị ga-enye ozi doro anya na engines ọchụchọ na usoro ịchọrọ ka ibe gị jikọtara. M na-agba ndị mmadụ ume ka ha dee ọdịnaya na-adọrọ adọrọ ndị mmadụ, ma elegharala ohere iji isi okwu anya.
Nchịkọta Nchọgharị Nchọgharị na peeji nke - mgbe njikọta saịtị gị dị na saịtị dị mkpa, dị ike yana otu isiokwu ahụ, ibe gị ga-agbago elu n'ọkwá. Ebe nrụọrụ kachasị mma na njikọta karịa nke ị nwere, ọ ka mma ọkwa gị.
Nke a abụghị ihe niile dị mkpa… na ugboro ole mgbanwe dị na ọdịnaya dị mkpa dịkwa mkpa. Agbanyeghị, ụzọ abụọ dị n'elu bụ opekempe nke ị kwesịrị itinye. Ebe ọ bụ na ị nwere ike ịnweghị peeji niile na webụsaịtị iji bipụta njikọ na, ị kwesịrị iji ohere nke forums, netwọkụ mmekọrịta na saịtị ndị ahịa ị nwere!
Ọ bụrụ na onye ahịa gị na-ekwerịrị ka kwadoro site na njikọ, e nwere ụzọ abụọ ị nwere ike idokwa. Ọ bụrụ na ha ga-ekwe ka njikọ agbatị, nke a bụ ezigbo:
Kwadoro site na DK New Media, Medialọ Ọrụ Mgbasa Ozi Ọhụrụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịdị ntakịrị karịa, jiri akara aha:
Kwadoro site naDK New Media
Ọ bụrụ na enyere gị aka ịnye obere akara ngosi ma ọ bụ onyonyo nwere njikọ, jiri ederede ọzọ na mkpado arịlịka gị wee kpọọ aha gị dabere na isi okwu:
Ihe atụ ndị dị n'elu dị adị n'ezie. DK New Media ugbu a ogo na 5 kacha elu na Google, Bing na Yahoo! maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọhụrụ, nke na-enweta 1,000 ọchụchọ ọchụchọ kwa ọnwa. Fọdụ n'ime nke a bụ n'ihi na njikarịcha peeji dị elu anyị meworo, mana imirikiti ya bụ mkpado arịlịka na saịtị anyị mepụtara.
Tags: ihe ngigidearịlịka ederede ahan'okpuruebuli njikọkwadoro site nakwadoro site na njikọA